Soosaarayaasha & Alaabada Cad ee LED | Shiinaha White Factory
White SMD LED 4014 Iftiin Sare
Sharaxaadda Badeecadda 4014 Cad oo Caddaan ah oo la soo saaray iyadoo la isticmaalayo qashin buluug ah iyo fosfooraska. Tiknoolajiyadda baakadaha ee nidaamka dhexe ee udubdhexaadka ah, barta nalka oo isku mid ah, waxqabadka ladagaalanka ladagaalanka foosha xun, iyadoo la raacayo heerarka imtixaanka caalamiga ah ee Mareykanka ee Star Star; Xidhmada siligga Dahabka ah, badeecadaha iyada oo loo marayo saamaynta heerkulka sare iyo hooseeya (-40 ℃ / 30min ~ 125 ℃ / 3omin) 500 wareeg oo tijaabooyin lagu kalsoonaan karo ah, kana sarreysa istaandarka tijaabada ugu adag ee warshadaha ...
5050 LED Guluubka leh caabbinta heerkulka sare
Sharaxaadda Badeecadan 5050 LED Light Source waa aalad wax-qabad tamar sare leh oo wax ka qaban karta kuleylka iyo xawaaraha sare ee wadista. Xirmada xirmada yar iyo xoojinta sare waxay ka dhigeysaa xulasho ku habboon nalka nalka LED-ka, nalka guluubka nalka, nalka tuubada iftiinka, iftiinka gadaashiisa iyo wixii la mid ah. Qaybtani waxay leedahay daabicid cag ah oo la jaan qaadi karta inta badan isku le'egka suuqa ee maanta. • Cabir: 5.0 x 5.0 ...
Daacadnimo sare oo buuxda oo buuxda Ra98 Kaleidolite taxane ah
Sharaxaadda alaabada Taxanaha Kaleidolite TM LED (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) waxay leeyihiin muuqaal la mid ah ilaha iftiinka dabiiciga sida qorraxda iyo iftiinka iftiinka, kaas oo ku qalabeysan astaamaha sare ee aaminnimada sare, midabka ballaaran iyo midab dhereg badan leh. Waxay ka caawiyaan sidii loo gaari lahaa midabeyn sax ah iyada oo aan loo huraynin hufnaanta lumen, kalsoonida iyo qiimaha. Codsiyada nalalka waxbarashada iyo ganacsiga, dukaanka tafaariiqda, galabta, isbitaalka iyo sidoo kale nalalka guryaha. Fure ...
2835 Laydh Tayo Sare leh
Sharaxaadda Badeecada Tani waa iftiinka iftiinka 'LED' 2835 LED waa qalab wax ku ool ah oo tamarta wax ku ool ah kaas oo xamili kara kuleylka iyo xawaaraha sare ee wadista. Shaxda xirmada yar iyo xooga sare waxay ka dhigeysaa xulasho ku habboon nalka nalka LED-ka, nalka guluubka nalka, nalka tuubada iftiinka, nalka hore ee iftiinka iyo iwm. Qaybtani waxay leedahay daabicid cag ah oo la jaan qaadi karta inta badan isku le'egka suuqa ee maanta. • Cabir: 2.8 x 3 ....
2835 Iftiinka sare ee LED
Sharaxaadda Badeecada Tani waa iftiinka iftiinka 'LED' 2835 LED waa qalab wax ku ool ah oo tamarta wax ku ool ah kaas oo xamili kara kuleylka iyo xawaaraha sare ee wadista. Shaxda xirmada yar iyo xooga sare waxay ka dhigeysaa xulasho ku habboon nalka nalka LED-ka, nalka guluubka nalka, nalka tuubada iftiinka, nalka hore ee iftiinka iyo iwm. Qaybtani waxay leedahay daabicid cag ah oo la jaan qaadi karta inta badan isku le'egka suuqa ee maanta. • Cabir: 2.8 x ...